Bayafunwa abakhuphe imiphefumlo emithathu! | Ilisolezwe
Bayafunwa abakhuphe imiphefumlo emithathu!
Iindaba / 20 April 2017, 11:37am / Unathi Tuta
Kapa: Akhangela naphantsi kwezicithi amapolisa eli leKapa, efuna abarhanelwa kwisiganeko sokubulawa kwabafana abathathu kwilokishi yaseNyanga kubusuku esibuvukayo. Imizimba yabafana abathathu abaphakathi kweminyaka elishumi elinesibhozo, namashumi amabini ananye ubudala - ifunyenwe kwisitalato iNtlangano kwilokishi yaseNyanga inamanxeba okudutyulwa.
Othethela amapolisa kweli phondo leNtshona Koloni, uKapteni Fredericks Van Wyk uthi, “Amapolisa aseNyanga ave izithonga zompu, ze aya kukroba nalapho afike afumana isithuthi esiluhlobo lweJetta emhlophe ime esitalatweni ucango lomqhubi luvuliwe.
Athe akusondela afumana imizimba yabantu abathathu, omnye kwisihlalo somqhubi, omnye kwisihlalo somkhweli ecaleni komqhubi, logama owesithathu ufunyenwe kumgama ozimitha ezimbalwa ukusuka kwisithuthi eso.”
Okwangoku akukabikho mntu ubanjiweyo kwaye unobangela wolu dubulo awukaziwa, amapolisa abongoza nabani na onolwazi ukuba eze ngaphambili.
Ukanti uninalume kaBuyisile Mpuntshu Dawedi obeneminyaka engamashumi amabini ananye ubudala, olelinye lamaxhoba esi siganeko, ekwangumnini sithuthi ekufunyenwe kuso imizimba, uxelele oonondaba ukuba, “niyabona indlela ahambe ngayo ichaza ukuba ibingumntu onjani.”